Nandona ny setriny ataon’India amin’ny Covid-19 ny fisavoritahan’ny fotodrafitrasa sy ny tsy fahampian’ny oksizena · Global Voices teny Malagasy
Olona mihoatra ny 2.000 no maty tao anatin'ny iray andro monja
Voadika ny 26 Avrily 2021 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, عربي, Français, English
Sary avy amin'i Raam Gottimukkala tao amin'ny Pixabay. Nampiasaina araka ny Pixabay License.
Mariho dieny aty am-piandohana fa rehefa governemanta Federaly no resahana dia governemanta no soratana fa rehefa ireo faritra manana fizakan-tena ara-pitantanana (azo ampitahaina amin'ny faritany mizaka tena) kosa no soratana etoana hoe fanjakana.
Mihoatra ny 2.000 ny olona matin'ny Covid-19 tao anatin'ny iray andro tao India. Tamin'ny alarobia, 21 Avrily, nahafaty marary 24 ihany koa ny fahatapahan'ny fanomezana oksizena, mampihasikasina fa nataon'ny valan'aretina difotra ny fototrafitrasan'ny toekarena fahatelo matanjaka indrindra ao Azia.
Ao anatin'ny hamehana ara-pahasalamana nateraky ny andiana Covid-19 faharoa, niezahan'ny governemanta ny hanafaingana ny fanaovam-bakisiny sy ny fampivelarana ny fepetran'ny fanokana-monina, fa tsy nanery kosa ny firindrinam-bahoaka.
Voarakitry ny Minisiteran'ny Fahasalamana tamin'ny 21 Avrily ny fahafatesana 2.023, isa ambony indrindra hatramin'ny nisian'ny valan'aretina mihoatra ny herintaona izao. Avy amin'ny tsy fahampian'ny fanafody manavotra aina toy ny Remedisvier sy ny fahatapahan'ny fanomezana oksyzena, ka hatramin'ny tsy fahampian'ny fandriana ao amin'ny hopitaly, dia tsikaritra ho miatrika krizy tsy voavaha ny tanàna na kely na lehibe na salasalany ao India.
Mitatitra ny manampahaizana manokana fa misy ny fitomboan'ny tranga Covid-19 any amin'ireo tanàna tier-2 sy tier-3 (tanàna sy vohitra kelikely, nosokajiana araka ny isan'ny mponina, izay matetika tsy ampy fotodrafitrasa lehibe amin'ny fitsaboana) manerana ny firenena, ary, na dia tsy ampy aza ny angon-drakitra (lahatahiry), dia manombana ny siantifika Indiana fa ny fisongana amin'izao fotoana izao dia narehitry ny ova (variant) Indiana, nomena anarana B.1.617, izay niely tamin'ny firenena miisa 15 farafahakeliny.
Mampiseho ny tsy fahampian'ny fiomanana avy amin'ny governemanta indiana ny sarin'ny hopitaly miatrika fahatapahan'ny oksizena, sy ny fandoroam-paty faobe sy ny vatana mipetrapetraka eny raha mbola mitolona mitady fiara mpitondra razana ny fianakaviana, ary mandritra izany fotoana izany, araka ny tatitry ny Reuters, mitady lalankafa mahazatra ny Indiana hifanampiana amin'ny fanangonana fandriana ho an'ny hopitaly sy tavoahangin'oksyzena ao amin'ny Twitter.
Nisioka ny sarin'ny sehatra mahavalaketraka tao amin'ny hopitaly iray tao New Delhi ny mpaka sary fanao an-gazetin'i Reuters, Danish Siddiqui:
Sehatra avy ao anatiny sy ivelan'ny hopItaly COVID-19, ao anatin'ny fielezan'aretina coronavirus tao New Delhi India 15 avrily 2021. Voarakitra androany tao India ny fisian'ny tranga mihoatra ny 200.000 sy fahafatesan'olona 1000+
Nosoritan'ilay epidemiolojista Ramanan Laxminarayan tao amin'ny New York Times fa tsy voafehin'India intsony ny toe-draharaha tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, nilazany fa “moramorainy loatra sy tsy ampy fiomanana ny governemanta”.
Maika loatra ny governemanta indiana hihiaka fandresena manoloana ny viriosy ary nitarika fivoriana mihitsy aza hiresaka ny fandreseny. Ny hafatra avy amin'ny governemanta indiana, amin'ny alalan'ireo famoriam-bahoaka amin'ny fifidianana sy ny fankalazana fetibe, moa amin'ny lafiny tsara indrindra, dia miafara amin'ny fanamoran'ireo fanjakana indiana ny fihibohany mba hameloma-maso indray toe-karena.
Nahazo fanakianana mamaivay ny praiminisitra indiana Narendra Modi tamin'ny tsy fahaiza-mitantana ny valan'aretina sy nanatontosa famoriam-bahoaka amin'ny fifidianana nahitana mpanatrika an'aliny tany amin'ny fanjakana Bengal Andrefana. Koa satria efa miharihary ny andian'aretina faharoa, nolazain'i Modi tamin'ity herinandro ity fa nandrava an'India “tahaka ny tadio” ny viriosy saingy tsy vitany ny nanao valandresaka ho an'ny gazety momba ny krizy.
Avy amin'ny fahafatesana miisa 1700 tamin'ny talata, dia 2023 ny isan'ny matin'ny Covid-19 ny alarobia maraina, any amin'ny firenena demaokratika hafa efa nanao valandresaka ho an'ny gazety ny praiminisitry ny firenena, mandray ny fanontaniana avy amin'ny mpanao gazety amin'ireo olana manindry sy ireo zama-manahirana hafa.
Tadion-javatra maro ka anatin'izany ny fifindran'ny ova (variant) haingana, ny famoriam-bahoaka politika sy ireo fetim-pivavahana Kumbh Mela – izay nahavory olona mihoatra ny 10 tapitrisa – no nanafaingana ny fielezan'ny Covid-19, hoy ny nolazain'ireo epidemiôlôgy. Ary tamin'ity andiany faharoa ity, ny ankizy sy ny latsaky ny 45 taona no tena asian'ity aretina tsikaritra teo aloha ho tena mampidi-doza ny beantitra, araka ny tatitry ny AFP.
Fanaovam-bakisiny sy adilahy politika
Mba hiantohana ny fanaovam-bakisiny ho an'ny daholobe rehefa nitatitra ireo fanjakana maro fa lany ny daozy, nanambara India fa afa-manao vakisiny izay rehetra mihoatra ny 18 taona manomboka amin'ny fanombohan'ny volana mey. Ny orinasa miorina ao Pune Serum Institute of India no nanambara vidiny tokana mitentina Rs 400 ($5,30) ho an'ny hopitalim-panjakana isaky ny daozim-bakisiny iray – efa ho 2,7 avo heny noho ny vidiny nifanarahan'ny foibe tamin'ny governemanta indiana.
Namoy namana mahafatifaty aho androany. Olona nahafinaritra, nampihomehy, malala-tsaina indrindra izay hanohana anao amin'ny raoma (toaka) sy Coke miaraka amin'ny kiendiendy. Manana izay tokony ahiana indrindra i Shaoli noho ny faharefoany ara-pahasalamana, ary niezaka tokoa ny mba hahazo vakisiny 1/n
Koa satria moa anjara andraikitr'ireo fanjakana no mividy ireo vakisiny – ka manaisotra amin'ny governemantan'i Modi ny andraikitra amin'ny fanaovam-bakisiny – dia niteraka valim-pahatezerana avy amin'ireo mpanao lalàna sy ireo fiadidiam-panjakana izany fanambaràna izany.
Nisioka i Pinarayi Vijayan, lehiben'ny minisitra ao Kerala:
Takiana ny fanaovam-bakisiny araka izay betsaka indrindra hamotehana ny andiany faharoa amin'ny Covid19. Takiana ny PM an'India hihevitra indray ny politika vaovao amin'ny fizarana ny vakisiny mba hiantohana amin'ny fisiany sy ho lany ary mba tsy hisy vesatra ara-bola fanampiny indray ho ampiharina, mba hahafahan'ireo Fanjakana manatontosa ny adidy voalazan'ny Lalampanorenana eo amin'ny sehatry ny fahasalamamana.
Nanoratra tamin'i Modi ny Praiminisitra Indiana teo aloha Manmohan Singh nanoro hevitra amin'ny hanafainganana ny ezaka fanaovam-bakisiny an'India. Nanoro hevitra ny governemanta izy hijery ny fitambaran'ny isanjaton'ny mponina vita vakisiny fa tsy hifantoka amin'ny isa. Nilaza i Singh, 88 taona, izay hita fa tratran'ny Covid-19 rehefa nanao test fa afa-manatsara kokoa ny endrika politika amin'ny setriny India. Natosiky ny minisitra ny fahasalamana ao India Harsh Vardhan ny toroheviny, izay nanoratra ho setriny fa tokony ho ny Antoko misy azy, ny Kongresy Nasionaly Indiana, no tolorany saina, antoko izay ampangainy ho miezaka hanakorontana amin'ny fanaovam-bakisiny ao India. Nankatoavin'i Vardhan fa mitovy hevitra amin'ny governemanta Indiana i Singh amin'ny fanasongadinana ny fanaovam-bakisiny ary navoitrany fa “toa tsy mitovy hevitra” aminy ny mpikambana hafa ao amin'ny Kongresy Indiana ary nataon-dry zareo ihany koa izay hampivadi-po ny olona amin'ny vakisiny sady tsy vitan-dry zareo ny “nanome voambolana tokana fankasitrahana ireo vondrom-piarahamonintsika sy ireo orinasa mpamokatra vakisiny tamin'ny famokaran-java-baovao anaty toe-javatra sarotra”.
Lavon'ny Covid-19 tamin'ny herinandro, ny mpanao gazety Vinay Srivastava, avy ao an-tanànan'i Lucknow, raha nandefa sioka mivantana ny antsipirihan'ny fidinan'ny haavon'ny oksizena ao aminy izy ary nitady vonjy tamin'ny manampahefana tao amin'ny governemanta. Maty tsy nahazo fitaboan'ny mpiasan'ny fahasalamana i Srivastava, 65 taona, raha nidina hatrany amin'ny 52 isanjato ny haavon'ny oksizena – ny manana fahasalamana amin'izany dia izay manana 95 isanjato na ambony kokoa. Nilaza izy fa tsy nisy dokotera na hopitaly nandray ny antsony.
Tsy ampy intsony ny toeram-pandoroana sy handevenana ny maty, raha mitolona mafy ny mpiasa hanatontosa ny fombafomba farany amin'ny fikarakarana ny maty noho ny tsy fahampian'ny fehezam-piarovana sy ny mpiasa. Namoaka ny tati-baovao fa tsy misahatra asa nandritra ny 14 andro ny toeram-pandoroana faty indiana, hany ka miempo ny vy amin'ny fatana ary mianjera ny fivoahan-tsetroka, izay mampivoitra fa mitombo ny isan'ny maty.
Mandritra izany fotoana izany, misy ny tatitra fa misy amin'ireo fanjakana no mampihena ny isan'ny maty. Peri Maheshwer, mpandraharaha teknjolojia, nanambara izao tao amin'ny Facebook:
Araka ny famotopotorana nataon'ny Financial Times manerana ny distrika fito ao amin'ny fanjakana efatra, olona 1833 no maty raha 228 monja no notaterina amin'ny fomba ofisialy
Koa satria votsotra ny fifehezana ny rafi-pitsaboana ao India, dia maro ny marary no lavon'ny areti-mifindra ao an-tranony na eny an-dalambe, tsy mahazo fikarakarana ara-pitsaboana. Tsy ho voaisa ao anatin'ny mifandraika amin'ny Covid-19 ireny fahafatesana ireny a nahatonga ny tatitra ataon'ny fanjakana amin'ny fahafatesana ho ambany kokoa noho ny tarehimarika tena izy, araka ny notaterin'ny Financial Express.
Saingy raha misandratra avy amin'ny fivonkonana goavana amin'ny tarehimariky ny fitomboan-karena isa-telovolana i India, dia tsy mazoto hampihatra ny fihibohana amin'ny mponina izay mety hampikatona ny fihariana sy hampody ny mpiasa mpifindramonina hiverina any amin'ny vohitra misy an-dry zareo ny politisiana – niangavian'i Modi ireo mpitariky ny firenena hanoka-monina ny toerana sy ny manodidina kosa.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Urvashi Kapoor.